italki - मैले यो अनुच्छेद लेखेको छु। कविता जस्तो छ। मलाई तपाईंका सोच भन्नुहोस। हामीले आगोका ज्वालाभित्र हेर्य
मैले यो अनुच्छेद लेखेको छु। कविता जस्तो छ। मलाई तपाईंका सोच भन्नुहोस। हामीले आगोका ज्वालाभित्र हेर्यौं, हाम्रो आफ्नो आत्माभित्र पनि देख्दै।हामीलाई पएको कुराहरूको बारेमा एक अर्कोसँग कुरा गर्दा खेरी म सोचें: के हो यो संसर? को हु म? आगोले मलाई प्रकाश दिंदा तरपनि अझ प्रश्नहरू देखाउँछ।
Oct 5, 2020 1:26 AM
Surprisingly amazing. I am myself an nepali, even though my first tongue is Hindi, but I know nepali and also I am hereacommunity tutor of English and Hindi.
Sep 1, 2021 7:37 AM
मैल यो एक अनुच्छेद लेखेको छु। अनुच्छेद कस्तो छ,कृपया मलाई तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोला। अागोको ज्वालाभित्र हेर्यौं, हाम्रो आफ्नै आत्माभित्र पनि नियालेर हेर्याैँ, महसुस गर्याैँ। हामीले पाएका कुराहरूकाे बारेमा एकअर्कासँग छलफल गर्याैँ। त्यस विषयमा कुरा गर्दा खेरी मैले साेचेँ: के हाे याे संसार? काे हु म? अागाेले मलाई प्रकाश त दिन्छ तर अझैपनि मेराे मनमस्तिष्कमा प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्।
Feb 28, 2021 1:36 AM
English, Hindi, Korean, Nepali, Spanish, Urdu
Hindi, Korean, Nepali, Spanish, Urdu